Sida dib loo bilaabo ama loo tirtiro Apple Watch ee qaboojinaya | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Sida dib loo bilaabo ama loo tirtiro Apple Watch kaaso sii qaboojinaya
Sida dib loo bilaabo ama loo tirtiro Apple Watch kaaso sii qaboojinaya
Waxaa laga yaabaa 12, 2020
Hadda oo Apple Watch ay ku shaqeeyaan chips-xawaaraha aadka u sarreeya, waxa aad yaraanaysaa inaad la kulanto arrimo sababi kara inay qaboojiso oo ay noqoto mid aan jawaab lahayn. Laakiin way dhici kartaa, iyo marka ay dhacdo, sidaan ayaa kaa caawin karta inaad hagaajiso.
Xaaladaha intooda badan, Apple Watch si fudud ayay isu xallin doontaa marka abka shilalka ama cillado naadir ah ay dhacaan. Waxaa jiri kara waqtiyo dib u dejin fudud loo baahan yahay. Markaad hoos u dhigto badhanka korantada waxba ma qabanayso, in kastoo, laga yaabo inaad u baahato inaad ku qasbiso.
Nasiib wanaag adiga, waa hab fudud oo qaadanaya dhowr ilbiriqsi, dhammaan xogtaaduna waxay ahaan doontaa mid sax ah marka Apple Watch ay dib u bilowdo.
Sida loo qasbo dib u dajinta Apple Watch
Kahor intaadan ku qasbin Apple Watch kaaga "dib u dejin adag," aynu hubsano "dib u dejin jilicsan" ma shaqeyn doono. Hoos u dhig badhanka dhinaca (kaas oo hoos fadhiya Digital Crown) ee qalabkaaga ilaa 10 ilbiriqsi.
Haddii slider-ku u muuqdo sidii caadiga ahayd, dib u dejin adag looma baahna; waad ku dhufan kartaa si aad u damiso Apple Watch, ka dibna isla isla qabso badhanka dhinaca inuu dib u daaro. Haddii tani shaqayn waydo, raac tillaabooyinka hoose:
Qabo Apple Watch's badhanka dhinaca.
Qabo Apple Watch's Digital Crown.
Hayso labada badhamada ilaa 10 ilbiriqsi ilaa sumadda Apple ay ka soo muuqato shaashadda, ka dibna sii daayo.
Qabo labada badhamada ilaa ay calaamadda Apple ka soo muuqato.
Hadda ka tag Apple Watch kaaga si uu shaygiisa u sameeyo, oo mar dhow way soo kici doontaa oo mar kale ayay soconaysaa. Ogow waa in aad marna xoog dib u bilaw Apple Watch (ama qalab kasta) inta lagu jiro cusboonaysiinta software; tani waxay keeni kartaa dhaawac aan laga soo kaban karin.
Ma u baahan tahay in la tirtiro?
Haddii Apple Watch uu ku sii socdo arrimaha oo uu si joogto ah u bilaabo qaboojinta, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad tirtirto dhammaan xogteeda oo aad dib u dejiso. Waxaa jira laba siyaabood oo tan loo sameeyo adigoo isticmaalaya iPhone-kaaga ama Apple Watch laftiisa.
Ku tirtir iPhone
Tirtiridda iPhone waa mid ku habboon sababtoo ah kaydinta saacaddaada si toos ah ayaa loo abuuray, waxaadna u isticmaali kartaa tan si aad si dhakhso ah u soo celiso dhammaan abka iyo dejinta marka tirtirku dhammaado.
Marka hore, hubi in Apple Watch-gaagu ku xidhan yahay iPhone-kaaga oo aad u dhowdahay, ka dibna raac tillaabooyinka hoose.
Fur fur Watch barnaamijka on iPhone.
In ka My Watch tab, taabo Apple Watch korka shaashadda.
Taabo badhanka info iyada oo ay weheliso magaceeda.
tubada Iska Ilaali Apple Watch.
tubada Dayactir si loo xaqiijiyo.
Habka ugu fiican ee lagu tirtiri karo haddii aad rabto kayd cusub.
Haddii aad haysato Apple Watch gacanta, waxaa lagu weydiin doonaa inaad rabto inaad ka saarto qorshahaaga gacanta. Waxaad u baahan doontaa inaad haysato haddii aad qorshaynayso inaad sii wadato isticmaalka saacaddaada marka mar kale la dejiyo.
Waxaa laga yaabaa in lagu weydiiyo inaad geliso lambarkaaga aqoonsiga Apple. Marka habka aan la wadaagin uu bilaabo, Apple Watch dib ayaa loo dajin doonaa oo dhammaan xogta si toos ah ayaa looga saari doonaa.
Ku masax Apple Watch
Haddii aad doorato inaad ku tirtirto Apple Watch lafteeda, uma baahnid iPhone ku dhow, laakiin ma heli doontid kayd. Taasi waxay la macno tahay inaad u baahan doonto inaad xoqdo Apple Watch haddii aadan haysan kayd kale oo kaydsan.
Haddii aad taas ku fiican tahay, raac talaabooyinkan:
Fur fur Settings app ku jira Apple Watch.
tubada General ka dib taabo Dib u celi (halka hoose ee liiska).
tubada Dhamaan Waxyaabaha iyo Meelaha oo dhan.
Geli koodkaaga, ka dib dhagsii Tirtir Dhammaan si loo xaqiijiyo.
Habka ugu fiican ee lagu tirtiri karo haddii aadan haysan iPhone ku habboon.
Deji Apple Watch
Hadda oo Apple Watch la tirtiray, waxaad u baahan doontaa inaad dib u dejiso. Tan waxaad ku samayn kartaa adigoo furaya Watch app on your iPhone, ka dibna taabo Isku xidh Watch Cusub.
Waxaa lagu weydiin doonaa inaad rabto inaad ka soo celiso kaydkii Watch ee kuugu dambeeyay, ama laga soo dejiyo meel eber ah. Waxaan kugula talineynaa soo celinta, taas oo ah habka ugu fudud ee lagu soo celin karo dhammaan abkaaga, dejinta iyo xogtaada.
Si kastaba ha noqotee, haddii ka dib soo celinta kaydinta aad sii wado inaad ku guulaysato arrimaha, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad isku daydo inaad tirtirto saacaddaada mar kale, ka dibna ka bilow xoqin adigoo isticmaalaya watchOS nadiif ah.
Bakhaarada waa la xidhay markaa xogta goobtu maaha mid khusaysa, sax? Khalad.
Sida loo Isticmaalo Twitter si loo kordhiyo Aragtida Raadinta Google